सामग्री रणनीति र सामग्री अनुकूलन
सामग्री अप्टिमाइजेसन रणनीतिमा पाँच प्रश्न
सोमवार, जुलाई 5, 2010 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
बन्द र मँ मैले याद गरे कि केहि सामाजिक मिडिया पंडितहरूले कम्पनीहरूलाई भन्न केही फरक पर्दैन जहाँ तिनीहरू सामाजिक मिडियामा भाग लिन्छन्, केवल तिनीहरू वास्तवमै do। अरूलेaको विकासको तर्क गर्छन् सामाजिक मिडिया रणनीति कहिल्यै सुरु गर्नु अघि।
त्यहाँ वेबमा सामग्री बनाउँदा आफैलाई सोध्नु पर्ने पाँच प्रश्नहरू छन्:
सामग्री कहाँ राख्नु पर्छ? - प्लेटफर्म जुन तपाइँ सामग्री राख्दै हुनुहुन्छ लक्षित दर्शकहरूको लागि अनुकूलित हुनुपर्दछ तपाइँ पुग्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाइँ खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि एक प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहोस् जुन सर्च इन्जिनका लागि अनुकूलित छ। यदि तपाईं व्यवसाय-बाट-प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, नेटवर्कहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न नबिर्सनुहोस् जुन व्यवसायहरू पूरा गर्दछ। यदि तपाईं उच्च गुणस्तर भिडियो प्रदान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई सेवामा मञ्चमा राख्नुहोस्।
कसरी सामग्री राख्नु पर्छ? - सामग्री त्यहाँ ट्राफिक ड्राइभ गर्न, र अन्तमा, तपाइँको कम्पनी को लागी व्यापार छ। तपाईंको सामग्री कडा कल-टु-एक्शनसँग राख्नु जुन ड्राइभिंग बिक्रीसँग सान्दर्भिक छन्। यदि तपाईं एक ट्वीट लेख्दै हुनुहुन्छ र रिट्वीट गर्न चाहानुहुन्छ भने, अधिक प्राप्तकर्ताहरू वा टिप्पणीहरूको लागि १ 140० वर्ण भन्दा पर कोठा छोड्नुहोस्।
कुन सामग्री राख्नु पर्छ? - सामग्री जुन ट्राफिकलाई भइरह मा आकर्षित गर्दछ मान्नु पर्ने सामग्री भन्दा बढि आवाश्यक हुनु पर्दछ जुन खोजी इन्जिनको लागि मात्र खोज्ने शब्दहरु मिल्दो छ। एक ई-पुस्तक भित्र सामग्री कम कुराकानी र अधिक संरचित हुनु पर्छ। एक ब्ल्ग बीचमा सामग्री बुलेट हुनुपर्दछ, एक प्रतिनिधि छवि समावेश हुन्छ, साथै कुराकानी लेखन शैलीसँग।
सामग्री कहिले राख्नु पर्छ? - यदि तपाईंको लक्ष्य व्यक्तिलाई घटनामा आकर्षित गर्न हो भने, घटनाको अघि, समयमा र पछि यसलाई प्रमोट गर्न सामग्री र्‍याम्प अप योजना बनाउनुहोस्। यदि तपाइँको लक्ष्य एक व्यवसाय दर्शक हो, सप्ताहका दिनहरूमा प्रकाशित गर्नुहोस्। सामग्री कहिले प्रकाशित गर्ने भनेर थाहा पाउँदा वास्तवमा तपाईंको कुराकानीहरू उठाउन सकिन्छ।
मैले कत्ति पटक सामग्री राख्नु पर्छ? - कहिलेकाँही, सन्देश दोहोर्‍याउँदा समग्र रूपान्तरण बढ्न सक्दछ। कहिलेकाँही महिनामा एक पटक एक विशेष शीर्षकमा लेख्नु भनेको एक पटक मात्र लेख्नु र रोक्नुको सट्टा सुधार अधिग्रहण दरमा निम्त्याउन सक्छ। आफैलाई दोहोर्‍याउन नडराउनुहोस्। फर्केका आगन्तुकहरूले बिर्सछन् (वा एक रिमाइन्डर चाहिन्छ) र नयाँ आगन्तुकहरूले सन्देश पहिले देखेका छैनन्।
रणनीति बिना वेबमा सामग्री डम्पिump गर्नाले तपाईंलाई केहि नतिजा प्राप्त हुन सक्छ तर अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्न र तपाईले गरिरहनु भएको कामको पूर्ण लाभ लिन सक्नुहुन्न। सामग्री निर्माण गर्न यो पर्याप्त गाह्रो छ जसले प्रभाव पार्छ - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले लेख्नुभएको सामग्रीमा केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोला केवल डम्पको सट्टा।
टैग: पुस्तक हस्ताक्षरनिष्क्रिय आयप्रयोगकर्ता प्रतिक्रियाप्रयोगकर्ता विचारहरू
कसरी र किन पुस्तक लेख्ने